> Resource > iPhone > Sidee soo celinta iPhone ka kaabta iPad
Ma doonaysaa in la soo celiyo aad iPhone kaga imaanayo iPad? Ha welwelin. Ilaa iyo inta aad synced aad iPad la Lugood, aad xogta iPad waxaa si nabad ah ku badbaadi in database in nidaamka file. Uma baahnid in aad waqti badan in la soo celiyo iPhone ka iPad gurmad file la Lugood, iyadoo dhinac saddexaad soo celinta qalab, waxaad soo celin karaa iPhone la iPad gurmad file in 2 talaabooyinka, dhididka ma.
3 tallaabo in la soo celiyo iPhone ka iPad gurmad file
First of dhan, aad u baahan tihiin si aad u hesho kaaliyaha qalab halkan: Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac iPhone Data Recovery) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) (dadka isticmaala Windows) (cusub oo ay taageerayaan macruufka 9). Barnaamijkan waxa 100% lagu kalsoonaan karo oo waxtar leh. Waxaad u isticmaali kartaa in la soo celiyo aad iPhone ka gurmad wax iPad, oo ku eegaan content ee faahfaahin ah ka hor inta aadan soo celin, taas oo go'aan ka mid aad rabto. Ka sokow iPad files gurmad, waxa kale oo kuu ogolaanaya inaad si loo soo celiyo aad iPhone la iPod xiriiri gurmad ama gurmad kale iPhone.
Download version maxkamad free of software tan hoose oo u rakibi aad Mac.
Next, aynu isku dayaan in ay soo celiyaan iPhone 6S Plus, iPhone 6S, iPhone 6 Plus / 6/5 / 4s / 4 / 3GS ka iPad files gurmad in tallaabooyin faahfaahsan oo wada.
Tallaabada 1. Waraaqda aad iPad gurmad file
Orod barnaamijka aad Mac iyo aad u hesho gurmad iPad. Waxaa Dooro oo guji "Start Scan" Macdan content ee Kulanka Xiisaha Leh.
Tallaabada 2. Soo Celinta iPhone ka iPad gurmad file
Ka dib markii ay soo saarida, waxaad ku eegaan kartaa dhammaan waxyaabaha aad iPad gurmad file. Waxaad calaameysaa kuwa aad rabto oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya aad Mac aad iPhone soo celiyo.
Hadda waxaad soo celin kartaa iPhone ka soo kabsaday iPad gurmad file. Ma ahan adag. Just u dajiyaan in aad Lugood iyo dhaqaaqo aad iPhone.